Vaovao - Mampahafantatra anao ny "revolisiona maitso" amin'ny indostrian'ny fonosana
Ento ho fantatrao ny "revolisiona maintso" amin'ny indostrian'ny fonosana
Ny fiantsenana an-tserasera sy an-tserasera dia hiaraka amin'ny fonosana marobe. Na izany aza, ny akora tsy vita amin'ny tontolo iainana sy ny fonosana tsy manara-penitra dia hiteraka fahalotoan'ny tontolo iainana eto an-tany. Androany, ny indostrian'ny fonosana dia miatrika "revolisiona maintso", manolo ireo fitaovana mandoto amin'ny fitaovana fonosana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana toy ny azo ahodina, azo hanina ary azo simbaina, mba hampiroboroboana ny fampandrosoana ekolojika maharitra ary hiarovana ny tontolo iainana an'ny zanak'olombelona. Androany, andao hifankafantatra ny "fonosana maitso".
▲ Inona ny fonosana maitso?
Ny fonosana maitso dia mifanaraka amin'ny fampandrosoana maharitra ary misy lafiny roa:
Ny iray dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny loharano;
Ny faharoa dia ny fahasimbana kely indrindra amin'ny tontolo iainana.
① fonosana miverimberina sy azo havaozina
Ohatra, ny fonosana labiera, zava-pisotro, saosy, vinaingitra sns dia azo ampiasaina indray amin'ny tavoahangin-vera, ary ny tavoahangy polyester koa azo averina amin'ny fomba sasany aorian'ny fanamboarana azy. Ny fomba ara-batana dia diovina mivantana sy voadio ary tototra, ary ny fomba simika dia ny manorotoro sy manasa ny PET (sarimihetsika polyester) voaverina ary mamolavola azy io ho lasa fonosana fanodinana.
Ireo akora fonosana azo hanina dia manankarena amin'ny akora, azo hanina, tsy manimba na mahasoa ny vatan'olombelona aza, ary manana toetra manokana toy ny tanjaka. Nivoatra haingana izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny akora akorany dia ahitana ny masira, proteinina, fibre zavamaniry ary akora voajanahary hafa.
③Ny fitaovana fonosana biolojika voajanahary
Ny akora biolojika voajanahary toy ny taratasy, hazo, akora tenona volotsangana, poti-kazo, lamba landy vita amin'ny rongony, wicker, bararata ary tahon-javamaniry, mololo vary, mololo varimbazaha sns ... dia azo simbaina mora foana amin'ny tontolo voajanahary, aza mandoto ny tontolo iainana tontolo iainana, ary ny loharano azo havaozina. Ambany ny vidiny.
Ity fitaovana ity dia tsy ny fiasa sy ny mampiavaka ny plastika nentim-paharazana ihany, fa koa afaka mampisaraka, manimba ary mamerina amin'ny laoniny ny tontolo voajanahary amin'ny alàlan'ny hetsiky ny zavamiaina bitika sy rano, na ny fiasan'ny taratra ultraviolet amin'ny masoandro, ary farany mamerina azy amin'ny endrika tsy misy poizina. Ampidiro ny tontolo iainana sy miverina amin'ny natiora.
▲ Ny fonosana biodegradable dia lasa fironana amin'ny ho avy
Anisan'ireo akora maitso fonosana, ny "fonosana maloto" dia lasa fironana ho avy. Manomboka amin'ny volana Janoary 2021, satria eo am-piomankomanana tanteraka ny "baiko famerana plastika", voarara ny kitapo plastika tsy simba, ary ny tsenan'ny fonosana plastika sy taratasy simba dia niditra tamim-pomba ofisialy.
Raha ny fahitana ny fonosana maitso, ny safidy be mpitia indrindra dia ny: tsy misy fonosana na fonosana kely, izay manala tanteraka ny fiantraikan'ny fonosana amin'ny tontolo iainana; arahin'ny fonosana azo averina, azo ampiasaina indray na fonosana azo ampiasaina. Ny tombony sy ny vokatra azo avy amin'ny famerenana dia miankina amin'ny rafitra fanodinana sy ny fahitan'ny mpanjifa azy. Rehefa manana fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny olona rehetra dia tena hihatsara hatrany ny trano fonenanay!
Fotoana fandefasana: Aug-18-2021